Ejiri umu anu aru ☝️: njirimara, oria ndi anu ulo, uru na ntughari, ihe oriri na nlekọta, usoro ndu na foto - Ugbo - 2019
Ekọwapụta ọdịdị nke Russian Pestrus site na akụkọ banyere ndị mmadụ na otu onye nke onye Ọstrịa ma ọ bụ onye ọrụ ugbo Belgium bụ na ndị nna nna nke otu ewu ewu na Russia na Europe jupụtara na ahịhịa ala nke Switzerland Alps.
Ọnọdụ nlekọta na nri
Mmalite nke ìgwè
Aha a na-akpọ "Ụdị Simmental" bụ naanị ehi ndị nwere ihe ndi mmadu nwere na nnukwu nnukwu mbo si na Bernese Oberland.
Ejiri anụ ụlọ Gothic mepụta ihe ndị e ji azụ anụ ahụ na-akpata site na narị afọ nke crossingpecific na ịhọrọ nhọrọ.
Nhọrọ nhọrọ nchịkọta bara uru ugbu a dị na simmentals na ihe ịrịba ama nke ìgwè:
mkpụmkpụ, oke oke nwere ụkwụ ụkwụ dị mkpụmkpụ;
mmepụta mmiri ara (60%);
iwe ngwa ngwa;
ike siri ike, ndị na-eguzogide ọrịa.
Ụdị bred na mpaghara ugwu 84 ma mee ka otu ụzọ n'ụzọ anọ nke anụ ụlọ ndị na-eji akwụkwọ ndebanye aha.
Ụdị ehi ndị a batara na mba anyị na narị afọ abụọ gara aga site na "ugbo" ndị nwe ala nke na-arụsi ọrụ ike na mpaghara ndị Tula, Smolensk na Voronezh. Osisi a na-eme ka ọ bụrụ ihe ndabere nke ịzụlite ozuzu na ịzụlite ụdị anụ ọhịa na-arụpụta nke ọma.
Enyemaka: Azụ anụ abụọ na ọkara dị iche iche na-anọchite anya azụ n'ụwa nile, bụ nke e kee ụdị nhazi nke atọ. Cows simmental bụ nke mbụ n'ime anụ iri kachasị na anụ ntụ.
Nyocha anya nke ọdịdị nke ụdị ahụ na-amalite mgbe ọ bụla. Akara akpụkpọ ụkwụ dị okeenwekarị ụcha nke ahịhịa na-acha pincha acha, na nnukwu ntụ ọcha. Obere oge, ehi na-acha uhie uhie. Akọwara agba:
mpaghara climatic nke cultivation;
ọnọdụ nke idebe na nri;
Isi bụ nnukwu, n'obosara, na oké (ọkara ogologo) n'olu; nwere mpi ọkụ dị nkọ (ihe ndị a na-eme n'oge a, ọbụna ehi, ọtụtụ mgbe - na-enweghị mpi); nke e ji ejiji ọcha ma ọ bụ pink;
Ahụ dị arọ, ma ọkara, n'elu ọkpụkpụ siri ike; ha nwere obi miri emi ma buru ibu (oke ehi nwere igirigi). Elu nke ehi (mgbe akpọnwụ) bụ 1.35, oke ehi dị 10 cm n'ogologo;
Withers na crocculum muscular nwere ike ịdabere na ụkwụ, ụkwụ ụkwụ. Akụkụ nke ụdị ndị ahụ bụ "elephantiness" nke ụkwụ ụkwụ;
Ohia ehi nwere nnukwu, na-eme ka ọkpụkpụ dị iche iche, na ọdịiche dị iche iche na mmepe nke n'ihu na azụ; Nwunye dị ogologo, obosara.
Ọ dị mma: Otu ngwaahịa a na-eme na Switzerland site na mmiri ara ehi nke Simmental cows emewokwa ka a mara ọkwa dị ka Emmental cheese. Ógbè ya dị kilogram 75, ma ọ bụ ọbụna 130. Nke a bụ isi ihe na-eme ka obi ụtọ Swiss.
Foto "Ntughari" umu ehi:
Cows ndị a na-eme ka anụ ha na nri ha na-eri nri nwee uru - 100%:
ihe ndi mmadu buru ibu - site na 400 ruo 700 n'arọ; umu ehi nke umu a, ndi toro maka igbummadu, di kilogram 350, heifers - obere ala 50 kg; fattening dị irè n'oge ndụ; anụ ahụ anụ ahụ nwere eriri abụba dị n'azụ, Otú ọ dị, mkpụrụ nke anụ dị ọcha ma e jiri ya tụnyere ụda ọkpụkpụ bụ obere;
na iche iche nke mmiri ara ehi, arụpụta ihe na ọnụ ọgụgụ 5-6 nke lactation na-abawanye ruo 3-6 puku lita (ihe ndekọ ndị e dekọrọ: 10-12 puku lita kwa afọ); nkwụsi ike nke mmiri ara ehi na-emepụta na 2-3 otu milking na-anọgide ruo mgbe 14 afọ;
Mmiri a na-ejikọta ya na mmiri nwere nnukwu abụba (3,7-4,2%), ka ị na-enwe ụtọ uto;
E nwekwara ụdị mmiri ozuzo ndị ọzọ mmiri ara ehi, dị ka: Kholomogorskaya, Yaroslavl, Jersey, Ayshirskaya, Red Steppe.
mgbanwe a na-atụghị anya nke iche iche (mmiri ara ehi na anụ) nwere ike ịbụ ihe kpatara ya: ngosipụta nke ihe ịrịba ama mbụ nke oria ahụ, ọrịa ntụpọ, mmerụ ahụ;
usoro omumu bu ihe eji eme ka ntozu nwoke na nwata (na umu anu aru site na onwa 8, na oke ehi site na afo ise);
ime afọ - na-emegharị n'emeghị nsogbu, ụmụaka amụrụ ọhụrụ dị njikere ịkwaga mgbe nne ha gasịrị;
ime afọ ime ọzọ na ehi nwere ike ime izu ole na ole mgbe ị na-achọgharị nwa;
akpa ala na-ada Ọnwa nke 31 nke ndụ;
iji chekwaa ihe ịrịba ama nke ìgwè ahụ, ha na-eji ehi-ndị na-azụ atụrụ ha na ndị na-emepụta ozuzu nke ndị Austrian nhọrọ;
ụmụ anụmanụ adịghị mma maka ọnọdụ ejidere, nri, gbanwee nke ọma na nri ọhụrụ, ọnọdụ ihu igwe nke ohere ọ bụla;
Otú ọ dị, ìgwè a chọrọ nlezianya, nri kwesịrị ekwesị iji nọgide na-arụ ọrụ;
ebe iwu na-ebu arọ, ọbụna umu ehi ehi Simmental na-eji nwayọ eme ihe, na-egosipụta iwe dị ọkụ.
Dị mkpa: Na nhazi umu ihe mmadu apugh ijide n'aka na ozo ozo ga - aputa n'enweghi mmeriri na mputa. Mkpụrụ osisi ndị na-adịghị ahụkebe adịghị atụfu ihe ịrịba ama nke ụdị ọbara na-erughị 50%.
Iwu maka nlekọta anụ ụlọ gụnyere:
Ihe ndị dị mkpa maka ịchekwa ehi:
ọkụ n'ọba (t0_ = 4 ntụgharị na 20Do) na-enweghị cracks na drafts;
eke iku ume venthash;
ala na-ekpuchi mmiri (osisi, brik);
bedding nke ahịhịa, peat ma ọ bụ sawdust (ntụgharị 2 ugboro n'ụbọchị);
oké oyi na-aga ije na-eji ihe ndina akwa akwaghachi;
okpomọkụ (rụrụ, replaceable) na-ata nri site na mmiri ozuzo site na mmiri ozuzo na anyanwụ;
A pụrụ ịṅụ mmiri ehi na mmiri dị ọkụ;
ehi na-asacha ajị ha kwa ụbọchị ma saa mmiri ha ọkụ;
eme ihe kwa ụbọchị, ịhụ oge nhata oge, kwesịrị ịgụnye nhicha, ịgha mkpụrụ, nri (maka mmiri ara ehi anọ a na-atụ aro na oge okpomọkụ na nke 3 n'oge oyi).
Dị mkpa: N'ebe ugwu, e nwere nnukwu ehi na-etinye na akwa nsị, nke na-eme ka okpukpu oyi na-eme ka tcC nke n'ọba microclimate.
N'okwu a, a na-eji akwa ụra edochi nhicha kwa ụbọchị, na n'oge opupu ihe ubi, a na-ewepụ nchịkọta niile site na ụlọ ahịa ahụ.
Maka oke arụpụta ụmụ anụmanụ nke ìgwè a ga - ejikọta ezigbo nri:
kwekọrọ na oge;
oge omumu ihe omumu.
E gbakọrọ ya:
ochie: 1 nri unit - 1414 kcal (nutritionally 1 n'arọ nke otis);
n'ụzọ ọhụrụ: na 1 ECE (unit feed unit) - 10 MJ nke ike mgbanwe (4.2 J = 1 cal).
Maka ụmụ anụmanụ na-arụpụta nri na-ahọrọ n'otu n'otu. Ihe oriri nke ehi chụrụ na-eme nke:
ihe oriri na-edozi ahụ (ahịhịa ịta ahịhịa ma ọ bụ ịgha mkpụrụ ahịhịa;
nri nri (hay, ahihia, ahihia nke ọka ọṅụṅụ na osisi leguminous);
ọka nri (bran, achicha, nri);
vitamin (E, D, A), mineral - Ca, Mg, P, Zn, Na, Se, NaCl; ma odighi ike na oke nke ihe ndi a di mkpa.
Dị mkpa: N'ime ehi na-eme nke ọma na mmụba nke metabolism site pasent 25, mkpa maka protein na-abawanye, nke na-enye nri site na bean hay, silage, na haylage. Ntinye nwere ike ime ka ịmụ nwa.
Anụ anụ nwere nrịanrịa nke ọrịa dị iche iche naanị ya:
tympania (ọrịa nke nje bacteria na-eme ka ọ bụrụ nke na-esite n'anụ ehi)
igbochi ndị esophagus (na-eri nri anyaukwu na-eri mgbọrọgwụ site na ehi);
traumatic reticulitis (mbufụt nke ntupu mebiri site n'aka ndị mba ọzọ na nri);
ụfụ ụbụrụ (ọrịa ndị ọrịa; na-emetụta isi na aka);
necrobacillosis (necrosis anụ ahụ, n'ihi ọrịa ndị na-ahụ maka ọdịiche dị iche iche, ụda, oghere ọnụ ọnụ);
mastitis (mbufụt nke mammary glands nke oda).
Otú ọ dị, maka ụdị Simmental naanị mastitis dị ize ndụnke nwere ike ịbụ:
milking iwu mebiri;
mmerụ na ọrịa nke oda;
njide nke placenta;
ọgwụgwụ endocrine n'ime ahụ.
Tinyere ọgwụgwọ ọgwụ na-arụ ọrụ dị mkpa igbochi ọrịa:
ịdọ aka ná ntị na-akarị;
mwepu nke ọnyá, ọrịa;
irube isi n'iwu nke nri na nlekọta.
Enyemaka: Ọ bụrụ na ọgwụgwọ ahụ metụtara usoro ọgwụ nje, ụmụ ehi na-enyeghi mmiri ara ehi ehi n'ime ụbọchị ise.
Cows simmental bụ ezigbo nhọrọ maka ọrụ ugbo ma ọ bụ ugbo. Ọbụna na-etiti na ụdị ndị ọzọ, ha na-achịkwa, na-enyefe ụmụ ha àgwà kachasị mma nke arụpụta ụwa.
Olee otu esi ahọrọ ụdị osisi kacha mma maka pickling na pickling
Cherry Tomato Black ma ọ bụ Black Cherry: nkọwa nke ụdị dị iche iche na-atọ ụtọ uto
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Nhọrọ dị mma maka onwe ma ọ bụ ugbo - ehi "Simmental" ụdị